Uthishanhloko usolwa ngokuphatha budlabha imali - Ilanga News
Home Izindaba Uthishanhloko usolwa ngokuphatha budlabha imali
Uthishanhloko usolwa ngokuphatha budlabha imali
SISEZIKWELETINI isikole kwaMgaga High School eMlazi eThekwini osekuswe uthishanhloko waso. ISITHOMBE NGU: SANDILE MAKHOBA
ZIMAPEKETWANE izinto KwaMgaga High School, kwaK, eMlazi, njengoba uthishanhloko wakhona kubikwa ukuthi useshovelwe eNgilosi Primary School kwaM, kulo leli lokishi – lapho kubikwa khona ukuthi uyasebenza – emuva kokuva kuqubuke uphenyo ngo-kusetshenziswa budlabha kwemali yesikole.
ILANGA lithole ukuthi uphenyo luqutshulwe wukukhala kwabantu abebenza umsebenzi wokuvuselela lesi sikole – esibalwa nezinomla-ndo kwezemidlalo eMlazi, sisaphe-thwe nguVuma Mfeka – nokulungisa izinsizakusebenza, kanye noku-khokhelwa kwabenza umsebenzi.
Kuvela ukuthi sekunesikhathi eside bengakhokhelwa.
Umthombo weLANGA uthi isigungu sesikole esisha sibhalele isekethe yezemfundo incwadi, sibika ukuthi selokhu singenile emandleni, kasikaze sinikezwe ngokusemthethweni izintambo yisigungu esidala.
“Isigungu silubikile udaba, kwa-sukunywa, kanti vele bekusenezi-khalo nangemali yeminyaka edlule,” kusho umthombo.
Kubikwa ukuthi isigungu esisha sibhekane nengwadla ngesikhathi sizama ukukhokhela abakweletwa yisikole.
Kutholakale ukuthi ikhadi lase-bhange lesikole kalisebenzi, oku-nezinsolo zokuthi kukhona elinye ebelisetshenziswa.
“Kukhona umuntu obelungisa izicabha, okweletwa u-R113 000, ugcine ekhokhelwe u-R36 000 ngesandla (cash), ewukhokhelwa nguthishanhloko, okungenye yezinto eziphenywayo.
“Nakhona ukuze ayithole imali, usizwe wukuziyela mathupha ema-hhovisi omnyango wezemfundo eTruro House, (eThekwini) eyo-bheka ukuthi kayikangeni yini imali yesikole,” kusho umthombo.
Ngokuthola kweLANGA, imali yezinsizakusebenza yesikole yakulo nyaka ilinganiselwa ku-R500 000 kanti isikweletu sesikole wu-R165 000. UMnu Sihle Hlongwa okungomunye wabakweletwa yilesi sikole ngomsebenzi awenza ngoLwezi (November)-2019, uthi okumenze wasukuma walwa, wukuthi beku-dlalwa umacashelana.
Utshele ILANGA ukuthi umunwe bewukhomba abahloli ngokunga-khokhelwa kwakhe.
Ethintwa usihlalo wesigungu esilawula isikole, uNkk T. Mbatha (elingatholakalanga igama lakhe) wale waphetha ukuphawula ngalolu daba, wavala ucingo.
Iphunzile imizamo yokuthola uthishanhloko njengoba ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa.
Ushiyelwe nomyalezo kodwa wangabuyela kuleli phephandaba kwaze kwashaya sikhathi sokuloba.
Okhulumela uMnyango weze-Mfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthe umnyango uyalusebenza udaba. “Akekho kuleli zwe onelungelo lokuphula umthetho, umnyango usazibheka lezi zinsolo,” kusho uMnu Mthethwa.
Previous articleUSuthu luphuce iChiefs iqatha
Next articleBanengcindezi abakuleli abakwamanye amazwe